Iyo Apple Watch inogona kuziva patinotyaira uye nekumira kutumira zviziviso | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch inogona kuziva kana isu tiri kutyaira uye kurega kutumira notices
Zvinozivikanwa kune vese kuti kana isu tichityaira isu tinofanirwa kutarisisa nenzira yakasarudzika uye yakasarudzika yemugwagwa, asi zviri pachena kuti izvi zvinoita sekutidhurira zvakanyanya. Kunzwisisa kuti kutsauswa kunogona kuuraya panguva yekutyaira ibasa remushandisi, asi kana kuwedzera pane izvi, Apple pachayo inovandudza tekinoroji yemawachi avo kuti varege kugamuchira notices patinenge tichityaira, zvirinani. Zviripachena inyaya yekusimudza mutyairi kuti asakanganiswa iine iPhone, Apple Watch, redhiyo kana zvimwe zvakadaro, asi kana maficha matsva erudzi urwu akawedzerwawo kumidziyo, zvese zvirinani.
Mune ino kesi inongova patent asi zvingave zvinonakidza kuti Apple ishandire pairi nemidziyo yayo sezvo ichigona kunyatsoziva kana mushandisi ari kutyaira uye zvaizodzivirira kusvika kwezviziviso kusvikira mota imwechete yamira. Zviripachena, iyi tekinoroji yakapihwa patent neApple inogona kushandiswa nechero inopfeka, uye inonakidza kwazvo.
Iyi patent yatove kunyoreswa uye yakatenderwa neApple muUnited States patent registry office, uye mashandiro acho anojekeswa kwatiri kuburikidza nemufananidzo watinawo pamusoro asi zvakanyanyisa zvinoenderana nemota pachayo, uye marongero emushandisi pachayo pachigadzirwa. Saka unogona kugadzirisa zviziviso kuitira kuti maemail kana mamwe mameseji arege kuziviswa, asi zvaizozivisa mafoni. Izvi zvinoenderana nekugadziriswa kwemushandisi uye kana mota iinewo CarPlay, inogona kunge ichinyatsonakidza. Tichaona kana pakupedzisira zvichizoguma zvasvika zviri pamutemo kana kuramba iri patent yakanyoreswa zvakanyanya nevakomana kubva kuCupertino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch inogona kuziva kana isu tiri kutyaira uye kurega kutumira notices
Tora Apple Magic Trackpad 2 nemutengo wakaderera kwazvo
Runyerekupe rutsva runopa kudzosera kumashure kuApple uye chengetedzo yeayo macOS system